Hydraulics Drive Manufacturer, mpamatsy, Factory - reducers, reducers kankana, boaty kankana, boaty planeta, reducers hafainganam-pandeha, mpanelanelana, kojakoja helika, fariboky ny bolabola, boatin'entana fambolena, giratra traktera, giratra kamiao, boaty kankana
Na mihetsika, mihodina, mamorona, mamolavola, manainga, manongotra, mihady na mivezivezy ny vokatrao dia afaka miantehitra amin'ny vokatra hydraulic hzpt ianao mba hanomezana ny fampisehoana ilaina mba hitazonana ny fifaninanana. Ny hzpt dia manolo-tena tsy voahozongozona amin'ny fitarihany amin'ny fampiharana finday sy indostrialy, ka mahatonga ny hzpt ho iray amin'ireo mpamatsy ny rafitra hydraulic, ny faritra, ny fifehezana ary ny vahaolana momba ny injeniera manerantany.
paompy hzpt, motera, fandefasana, valves, varingarina, fifehezana, fantsona sy kojakoja dia manome fitambarana tsy manam-paharoa ny haitao azo antoka sy ny endrika vaovao, izay azo adika mivantana amin'ny fampisehoana azo antoka sy amin'ny fotoana maharitra. Na mila singa tokana ianao, vahaolana namboarina manokana, na singa misy eo anelanelany, ny hzpt no mpiara-miasa amin'ny safidy ho an'ny fampiharana finday sy indostrialy mila miasa tsara fotsiny.
A rafitra fiara mihodina dia fiara na fifindran'ny rafitra izay mampiasa pressurized tsiranoka hydraulic mamily milina hydraulic. Ny teny hoe hydrostatic dia manondro ny famindrana angovo avy amin'ny mikoriana sy ny tsindry fa tsy avy amin'ny angovo kinetika ny mikoriana.
Ny rafi-pamiliana hydraulic dia misy fizarana telo: ny generator (oh: a paompy hydraulic), entin'i an motor motor, fandoroana maotera na ny Windmill; valve, filters, piping sns (hitari-dalana sy hifehezana ny rafitra); ny motera (oh môtô hidraulika or varingarina hydraulic) hitondra ny milina.
Fitsipika mitondra fiaraOvay
Lalàna Pascal no fototry ny rafitry ny fiara mihodina. Satria ny tsindry ao amin'ny rafitra dia mitovy, ny hery omen'ny tsiranoka ny manodidina noho izany dia mitovy amin'ny tsindry × faritra. Amin'ny fomba toy izany, ny piston kely dia mahatsapa hery kely ary ny piston lehibe dia mahatsapa hery lehibe.
Toy izany koa no mihatra amin'ny paompy hydraulic miaraka amina habe kely voafafa mangataka kely tsela, atambatra amin'ny motera hydraulic miaraka amina volon-drivotra lehibe manome tsela lehibe. Amin'izany fomba izany dia azo amboarina ny fifindrana misy refy iray.
Ny ankamaroan'ny rafitra familiana hydraulic dia mampiasa varingarina hydraulic. Eto no ampiasaina io fitsipika io ihany - ny tselika kely iray dia azo ampitaina amin'ny hery lehibe.
Amin'ny alàlan'ny famonoana ny tsiranoka eo anelanelan'ny ampahan'ny mpamorona sy ny môtô, na amin'ny alàlan'ny paompy hydraulic sy / na môtô miaraka amin'ny habetsaky ny savoka azo ovaina, azo ovaina mora foana ny tahan'ny fampitana. Raha toa ka mampiasa throttling dia voafetra ny fahombiazan'ny fandefasana. Raha toa ka azo ampiasaina ny paompy sy motera azo ovaina, dia tena lehibe tokoa ny fahombiazany. Raha ny marina, hatramin'ny taona 1980 tany ho any, ny rafitra mpamily hydraulic dia zara raha nisy fifaninanana tamin'ny rafitra mpamily hafa azo ovaina.
Amin'izao fotoana izao, ny rafi-pandehan'ny herinaratra mampiasa servo-motor elektrika dia azo fehezina amin'ny fomba tena tsara ary afaka mifaninana mora foana amin'ny rafi-pamily fiara mihodina. Ny varingarin-tsolika dia raha ny marina, tsy misy fifaninanana ho an'ny hery mivantana. Ho an'ireo varingarina ireo dia hijanona ho liana ihany ny rafitra hydraulic ary raha misy ny rafitra toy izany dia mora sy lojika ny fampiasana an'ity rafitra ity ho an'ny kapila mihodina amin'ny rafitra mangatsiaka ihany koa.
Ny cylindro amin'ny hidradrika (antsoina koa hoe motera hydraulic hydraulic) dia mekanika actuators izay ampiasaina hanome hery hery amin'ny alàlan'ny famelezana tapaka. Ny varingarina dia afaka manome hery mitaona sy an-tapitrisany taonina metrika amin'ny rafitra hydraulic fotsiny. Varingarina hydraulic tena tsotra no ampiasaina amin'ny milina fanontam-pirinty; eto, ny varingarina dia misy volavola amin'ny vy iray miaraka amina plunger atosika ao anatiny ary nasiana tombo-kase amin'ny fonony. Amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny tsiranoka hydraulic amin'ny habetsany, ny plunger dia atosika amin'ny herin'ny tsindry amin'ny faritra plunger.
Ny varingarina manify kokoa dia manana vatana misy fonony farany, a tehina piston, Ary ny lohan'ny varingarina. Amin'ny lafiny iray ny farany ambany dia, ohatra, mifandray amin'ny iray clevis, fa amin'ny lafiny iray kosa, ny tsorakazo piston dia hita mialoha miaraka amin'ny clevis tokana. Ny akorandriaka volo dia mazàna dia misy fifandraisana hydraulic amin'ny lafiny roa; izany hoe, fifandraisana eo amin'ny ilany ambany ary fifandraisana eo amin'ny lafiny lohan'ny varingarina. RAHA menaka atosika ao ambanin'ny piston, ny tehina piston dia atosika ary ny menaka izay teo anelanelan'ny piston ary ny lohan'ny varingarina dia atosika hiverina any amin'ny fitoeran-diloilo
Tabilao boribory lehibe ho an'ny misokatra loop ary mihidy loop rafitra.
Ny motera hydraulic dia ny mifanila rotary an'ny varingarina hydraulic. Mifanaraka amin'izany, ny motera hydraulic dia tokony hifanakalo amin'ny paompy hydraulic, noho ny zava-misy dia manao ny asany mifanohitra amin'izany izy. Na izany aza, ny ankamaroan'ny paompy hydraulic dia tsy azo ampiasaina ho motera hydraulic satria tsy azo averina. Ary koa, maotera mandeha ho azy dia matetika natao ho an'ny tsindry miasa amin'ny lafiny roa amin'ny motera. Ny tsy fitoviana hafa dia ny môtô azo averina amin'ny alàlan'ny valizy mihodina.
Ny tsindry amin'ny rafitra hydraulic dia toy ny herinaratra amin'ny rafitra elektrika ary ny tahan'ny fikorianan'ny tsiranoka dia mitovy amin'ny ankehitriny. Ny habe sy ny hafainganan'ny paompy dia mamaritra ny tahan'ny mikoriana, ny enta-mavesatra amin'ny motera no mamaritra ny tsindry.